सहकारी जोगाउने ठेकेदार को ?
सहकारी भाग्यो भने भंगेरो टाउके अक्षरमा छाप्नुहुन्छ, हामीले कति राम्रा काम गरेका छौं त्यसको कुनै वास्ता छैन’ सहकारी नेताहरुले संचारकर्मी र संचारमाध्यमलाई बारम्बार लगाउन आरोप हो यो । यतिसम्म कि आज भोली सहकारीका नेताहरु संचारकर्मीलाई निजी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रायोजित र संचालित भन्ने घटिया आरोप समेत लगाउन थालेका छन् ।
आजकाल कार्यक्रमहरुमा सहकारी नेताहरुको कुरा सुन्दा यस्तो लाग्छ कि आफुहरु मात्र सहकारी जोगाउने ठेकेदार हुन्, आम संचारमाध्यम र संचारकर्मी त सहकारीलाई सिध्याउन मात्र लागि परेका छन् ।
संचारमाध्यमको प्रकृती नै हो कि गलत कामलाई खबरदारी गर्ने । सोही धर्मलाई निर्वाह गर्दै गलत काम गर्ने सहकारी र तिनका संचालक विरुद्ध लेख्दा अभियानका नेताहरुको टाउको दुखाई किन ? के सहकारी नेताहरु सुधार चाहादैनन् ? उनीहरु संचारमाध्यमको आलोचनात्मक सुझाव सुनेर सुध्रन आवश्यक छैन र । प्रचलित नीतिगत उखान छ, भगवान मलाई मित्रदेखि बचाउ, शत्रुदेखि त म आफै बच्छु । यसै भनाईलाई हेर्दा पनि सहकारी नेतृत्व संचारमाध्यमलाई किन सहन सकेका छैनन् त ? प्रश्न गम्भिर छ । संचारमाध्यमले औल्याएको गल्ती सुधार गर्न उनीहरु तयार हुदैनन्, न त प्रकाशित, प्रसारित समाचार गलत हो भनेर पुष्टि गर्ने आधार नै छ, फगत संचारमाध्यमलाई गाली गरेर आफु चोखिन मात्र खोजिरहेका छन् । यति कुनै संचारमाध्यमले गलत कुरा लेखेको छ, बोलेको छ भने कानुनी उपचारको बाटो खोज्नुहोस् न, किन मिथ्या आरोपमा मात्र उत्रनुहुन्छ ।
प्रशंग रह्यो, सहकारीले गरेका राम्रा कामको बारेमा किन समाचार बन्दैन त ? संचारकर्मीको आँखाले हेर्दा सहकारीले गरेका राम्रा कामको पनि धेरै समाचार आएका छन् । तर, जुन रुपमा सहकारीकर्मीले चाहेका छन्, राम्रा कामको बारेमा पनि व्यानर न्यूज बनोस् भनेर सो स्थान पाउने हैसियतको काम सहकारीले गरेका छन् र ? फेरी सहकारी संस्थाले आफु कत्तिको पारदर्शी भएका छन त ? आफ्ना गतिविधि आमसंचारमाध्यममा पुर्याउन कत्तिको पहल गरेको छन् ? यसले पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ । यसबारेमा किन बुझ्दैनन् त सहकारीकर्मीहरु ?
हो, सकारात्मक कामको पनि समाचार बन्नुपर्छ । जसको कारण राम्रो काम गर्ने सहकारीलाई प्रत्साहन मिलोस् । तर संचारकर्मी आफै जादुको छडी त होइन, जसले सबै किसिमका सुचनाहरु थाहा पाओस्, उसले त जनताका सुचना आमसंचारमाध्यममा पुर्याउने मात्र हो । त्यसैले लुकेका समाचार बाहिर ल्याउनका लागि सम्बन्धित पक्षले पनि पहल गर्नु आबश्यक छ । संचारमाध्यम सर्वसाधारणलाई सुचना दिने सम्वाहक हो । सकारात्मक समाचार दिने नाममा सहकारीको सबै गलत काम विर्सिएर संचारकर्मीहरु घाटीमा हारमोनियम भिरेर भजन गाउँदैनन्, सबैलाई चेतना भया ।
Posted by Journalist Yadav at 8:00 AM No comments: